I-China eyenziwe ngokwezifiso ezinemibala enobungane i-Eco Black Joint Strip Striking Canvas Backpack Bag Umkhiqizi kanye noMphakeli | Zhihongda
Isitolo esidayisa yonke impahla ngokwezifiso Ukuphrinta Ilogo China Advertising ...
Bolsa de Alimentos Uziphu White Lunch Cooler Bag Ins ...
IBolsas De Regalo Long Handle Grocery Bag Coloured Co ...
Isikhwama Sokuphromotha Esimhlophe Esilukiwe Sokuthenga Esingafani
Custom Uziphu foldable Non Nokwelukiweyo foldable Suit Indwangu ...
Uziphu Pink Blue Nonwoven Thermal Bag Khipha Seafo ...
Canvas isikhwama isishuqulu ephaketheni fashion ukotini drawstring b ...
Ngezifiso Colorful Nobungane Eco Black Joint Udvweba ...
Kwenziwe ngentando ngokwezifiso izinga okusezingeni ukotini canv ...
Umdwebo wesikhwama umbala wemvelo awunalutho ukotini umugqa wokudonsa ...
Eco-Friendly strstring Bag Ukotini Isipho Bag Drawstri ...
Kwenziwe ngentando isikhwama se-Drawstring sesipho semvelo sedra ...
evuselelekayo i-organic grocery yezitolo eco friendly 100% ...
12oz Heavy Duty Eco Izikhwama Ngaphakathi Brand Ilebula G ...
Eshibhile 100% Ukotini Canvas Shopping Tote Bag nge Guss ...
Custom logo enkulu esebenza ukuthenga izikhwama tote nge r ...
Grocery yezitolo eco-friendly 100% ukotini ngendwangu tot ...
Ilogo-Phrinta Organic Ukotini Canvas Indwangu elingenalutho Tote B ...
Isikhwama se-Canvas esikhwameni esenziwe ngokwezifiso esenziwe ngokwezifiso
Okwenziwe ngesandla eChina nakho kuyizikhwama zethu zakudala zikakotini wendwangu yendwangu ngentambo yokudonsa. Isetshenziselwa imicimbi yezemidlalo, ukupha noma izipho zokuphromotha ezinkampanini. Izikhwama zethu zinekhwalithi ephezulu futhi ziyagezeka. I-logo noma isiqubulo sakho singaphrintwa ngqo esikhwameni ngemibala yesihlahla senjoloba engeyona enobuthi. Usayizi ungashintshwa ucelwa iklayenti. Isikhwama singasetshenziswa njengobhaka futhi siyasebenza kakhulu. Izintambo zikakotini eziqinile zingavala phezulu.
1. Okwenziwe ngesandla eChina nakho kuyizikhwama zethu zakudala zikakotini-ngendwangu ezinezintambo. Isetshenziselwa imicimbi yezemidlalo, ukupha noma izipho zokuphromotha ezinkampanini. Izikhwama zethu zinekhwalithi ephezulu futhi ziyagezeka. I-logo noma isiqubulo sakho singaphrintwa ngqo esikhwameni ngemibala yesihlahla senjoloba engeyona enobuthi. Usayizi ungashintshwa ucelwa iklayenti. Isikhwama singasetshenziswa njengobhaka futhi siyasebenza kakhulu. Izintambo zikakotini eziqinile zingavala phezulu.
Ukusetshenziswa: Isipho sokwenyusa, isikhwama sezemidlalo, isikhwama sesikole, isikhwama sesipho
3. Kwenziwe ngezandla, ku-eco-friendly, ukuvaleka kwezintambo ngesici okufanele usithwale njengobhaka, ukuphrinta kwelogo
4.Customize: Sizophrinta i-logo yakho kwisikhwama ngasinye, usayizi nombala kungenziwa ngezifiso futhi
Igama lento Isikhwama se-Canvas esikhwameni esenziwe ngokwezifiso esenziwe ngokwezifiso
Ukusetshenziswa Ukuthenga, Isipho Sokukhuthaza, Ukupakisha, Isikhwama Sezindwangu, njll.
Izinto Ukotini canvas 100% ukotini, 4-20oz, 100gsm-570gsm, 6oz (175gsm), 8oz (230gsm), 10oz (280gsm), 12oz (340gsm)
Usayizi 10x15cm, 15x21cm, 20x25cm 25x30m 30x35cm 35x40cm noma usayizi owenziwe ngokwezifiso.
Umbala Umbala wemvelo, omhlophe, omnyama noma owenziwe ngezifiso ngokwesicelo sakho.
Ukuvalwa Intambo kakotini, intambo esontekile, njll.
Izimo okuyisicaba, phansi okuyisikwele, phansi okuyindilinga, phansi kwesikwele kanye ne-gusset
LOGO Logo ngezifiso
I-OEM ne-ODM Yebo, siyamukela!
Ukuphrinta ukuphrinta kwesilika kasilika, ucwecwe bronzing nokudlulisa ukushisa ukuphrinta, Thermal Sublimation ukuphrinta, Ukuphrinta Kwedijithali, njll.
Isikhathi sokukhiqiza Izinsuku 15-25, ngokuvumelana nobuningi bakho.
Ukupakisha 200 PC / ibhokisi, noma ngokuvumelana nemfuneko amakhasimende '
Indlela yokuthumela ngasolwandle, ngomoya, ngokuveza
Isampula 1). isikhathi isampula: Kungakapheli izinsuku 3-5.
2). Ukukhokhiswa kwesampula: Ngokwemininingwane yomkhiqizo.
3). Ukubuyiselwa imali kwesampula: yebo uma inqwaba
4). Ukulethwa kwesampula: UPS, FedEx, DHL,
5). Isampula yethu yesitoko imahhala, kepha udinga ukukhokha isampula yezimpahla
Isikhathi sokukhokha 30% idiphozi ngu-T / T kusengaphambili, ibhalansi engu-70% ngo-T / T ingakafiki imithwalo
L / C, D / A, D / P, Western Union, Paypal, Visa, Debit Card, Ikhadi lesikweletu
Imbobo ye-FOB UChengdu noma iShanghai.
Ukuphrinta kweSilkscreen: sebenzisa ekwakhiweni okuqukethe imibala embalwa.
Ukuphrinta Kwokudlulisa Ukushisa: sebenzisa kumklamo ohlanganisa okuncane futhi uqukethe imibala eminingi.
Ukuphrinta Kwedijithali: faka isicelo kumklamo ohlanganisa okukhulu futhi uqukethe imibala eminingi.
Sicela usitshele imfuneko sakho sokuphrinta noma usithumelele imidwebo yakho yokuklama, sizoncoma indlela yokuphrinta efaneleke kakhulu kuwe.
Imvamisa, Sisebenzisa i-6oz (175gsm), i-8oz (230gsm), i-10oz (280gsm), i-12oz (340gsm) impahla ukwenza isikhwama se-cotton canvas. Ungakhetha enye impahla yokujiya njengoba ufuna. Singazanelisa zonke izicelo zakho.
Ungakhetha umbala. Sinikezela ngezinto zekotini ngendwangu ngemibala ehlukahlukene. Imvamisa, Umbala wemvelo ujwayelekile. Sicela usitshele ukuthi yimuphi umbala owufunayo.
Singenza izinhlobo eziningi zesikhwama sekotini lesikhumba. Uma une-design, lokho kungcono. Uma ungenawo umklamo noma umbono, akunandaba. Sinokuhlangenwe nakho okuningi kokukhiqiza izikhwama zikakotini wendwangu futhi singakunikeza iziphakamiso ezithile.
Izikhwama zikakotini / ze-Canvas
Izikhwama ezingezona ezelukiwe
Izikhwama ezipholile ezibandayo
Izikhwama zenqola ezinamasondo
Izikhwama zezimonyo Izikhwama zangasese
1. Q: Ngingakwazi ukwenza ngokwezifiso izikhwama zami?
A: Singazenza izikhwama ngokuya ngezidingo zakho.
2. Q: Ngingaphrinta uphawu lwethu kwimikhiqizo yami.
A: Yebo, Singaphrinta uphawu lwakho kumikhiqizo yakho. Sidinga kuphela ukuthi unikeze ifayili lakho le-logo ngefomethi ye-PDF noma ye-AI.
3. Q: Ungakanani umkhiqizo?
A: Amanani anqunywa yizinto eziningi ezifana nezinto, isitayela, usayizi nokunye. Uma ungitshela izidingo zomkhiqizo othile, singakunikeza intengo engcono kakhulu kuwe.
4. Q: Siyini isikhathi sokukhiqiza?
A: Izinsuku eziyi-15-25 ezijwayelekile, kuya ngobungako. Sicela usitshele usuku olufunayo, singazama konke okusemandleni ukukwanelisa.
5. Q: Kungenzeka yini ukuthola isampula ngaphambi kokufaka i-oda?
A: Yebo, impela, ekuhloleni ikhwalithi nokubonakalayo, amasampula esitoko ngaphandle kokuphrinta okwenziwe ngokwezifiso anganikezwa ngokukhululeka ku-akhawunti yakho yekhuriya. Sizojabula ukukuthumela amasampula wamahhala.
6. Q: Kuthatha isikhathi esingakanani isikhathi sokukhiqizwa kwesampula?
A: 1 usuku amasampula ekhona. Izinsuku 3-5 amasampula egcizelele.
7. Q: Kuthunyelwa kanjani i-oda lami? Ngabe izikhwama zami zizofika ngesikhathi?
A: Ngolwandle, ngendiza, noma ngabathwali abazwakalayo (UPS, FedEx, TNT) isikhathi sokuhamba sincike ku
8. Q: Yimiphi imigomo yokukhokha?
Idiphozi engu-30% T / T, ibhalansi engu-70% ngaphambi kokulethwa.
Idiphozi engu-30% T / T, ibhalansi engu-70% ibhekene ne-BL.
100% kusengaphambili, L / C lapho ubona, iWestern Union / i-Paypal yokukhokha okuncane.
9. Umbuzo: Ukuthola ikhotheshini, imiphi imininingwane edingekile ongasitshela yona?
A: Izinto, usayizi, isitayela, umbala, iphrofayela ye-logo, usayizi we-logo, imigomo yokuphrinta yelogo, ubuningi, kanye nezinye izidingo.
Langaphambilini Isikhwama sezintambo ezenziwe ngokwezifiso zekhwalithi ephezulu ezenziwe ngezifiso
Olandelayo: Isikhwama se-Canvas isikhwama esikhwameni semfashini ukotini wokudonsa isikhwama isikhwama ukotini umugqa wokudonsa ephaketheni ikhanivasi isendlalelo sezinto zokugcina isikhwama singaphrinta ilogo
Eco-Friendly Straring Bag Ukotini Isipho Bag Dra ...
Sokuheha isipho isipho isikhangiso 12oz co ...
Ngokwezifiso Ephrintiwe Coloured Plain 100% Ukotini Canvas ...
Okugcwele ephrintiwe usayizi ejwayelekile ngokwezifiso logo ephrintiwe ...
evuselelekayo organic zokudla yezitolo eco friendly ...
wholesale zemvelo ukotini emhlophe ngendwangu tote isikhwama ...